Maamulka Gobolka Nugaal oo Diiwaangelin ku sameynaya dadka ka soojeeda Baay & Bakool. – SBC
Maamulka Gobolka Nugaal oo Diiwaangelin ku sameynaya dadka ka soojeeda Baay & Bakool.
Qorshe lagu sugayo amaanka Magaalada Garoowe caasimada Puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa waday Maamulka gobolka Nugaal ee Puntland.
Qorshahaasi ayaa ah mid lagu diiwaan gelinayo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Garoowe, siiba kuwa ka soo jeeda gobolada Koonfureed ee dalka, gaar ahaan gobolada Baay iyo Bakool.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali oo la halay SBC International ayaa ka warbixiyay qorshahani, isagoona sheegay in ay kaga gol leeyihiin sugida amaanka guud ahaan gobolka.
“Qorshahani waa dar dar gelin lagu sameynayo xaga Amniga Dhinac walba, waxaanuna qorsheenay in cid walba oo Garowe ku soo hoyata la ogaankaro meesha ay degentahay iyo waxa ay tahay” waxaa sidaasi yiri gudoomiye Qarjab.
Sidoo kale Ganacsatada reer Koonfureedka ah ee ka soo jeeda goboladaasi ayaa iyana uu sheegay gudoomiyaha in ay isa soo diiwaan geliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan, ayna qaataan kaarka aqoonsiga, ayna sheegaan cidii ku soo korarta, taasina ay ahayd sida uu sheegay gudoomiyuhu is afgarad kulan ay wada yeesheen ganacsatadaas iyo maamulka gobolka.
Isagoo sharaxayay kaararka aqoonsi ee ay siindoonaan ganacsatada iyo dadka kaleba ayuu sheegay gudoomiya Cabdi Xirsi Cali mid lagu ogaanayo qofwalba waxa uu yahay, waxa uu ka ganacsado iyo meelaha lagala xiriiri karo .
Qorshahan uu wado maamulka gobolka Nugaal ayaa noqonaya hadii uu hirgalo qorshe ceynkan oo kale ah oo markii ugu horeysay lagu soo rogo rug ka mid ah Puntland, waxaanu sida uu sheegay gudoomiyuhu qorshahani yahay mid siweyn amaanka uga qeyn qadanaya.
Siteenbar 12, 2011 at 12:43 am
Waa wax loo baahanyahay in amniga dalka la sugo sibii indha ku haynta dadka soogalotiga ah Taa waa mid loo baahnaa hadana in lafuliyo Mar hore hadan waa n u hambalyaynaynaa duqa magaalada Abdi iyo lamaha amniga sida police ka dhaman waxaan leeyahay heer puntland gacmaha ha la isqabsado